Ye2022 Samsung's top-tier flagship renji ndiyo Galaxy S22 yakatevedzana, inosanganisira iyo diki S22, ivo yakakura zvishoma S22+, uye yakakura zvikuru S22Ultra - iyo yekupedzisira iyo inouya neyakakomberedzwa-kumucheto chidzitiro uye yakabatanidzwa S Pen stylus, kusiyana nemamwe mamodheru maviri. Kune iyo yakazara seti yemusiyano pakati pevatatu, tarisa chimiro chedu, chinongedzo pazasi:
Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus vs S22 Ultra: Ndeipi misiyano?
Nepo ese mamodheru eGlass S22 achisvika neGoogle's Android 12 sisitimu yekushandisa, Samsung's One UI 4.1 interface inogara pamusoro, ichiunza yakasarudzika software mapoinzi uye zvinodzora. Vazhinji vashandisi vanozojairana, asi mamwe marongero - senge machinjiro efoni kana kutora skrini - anogona kusiyana kune mamwe mahandset eAroid pamusika.
Pane zvakawanda zvekudzidza uye akawanda matrinkets aunogona kuwana. Heino dhairekitori rakadzama kuti iwe ugone kuve nemibvunzo yakasiyana-siyana inopindurwa uye kuita zvakanyanya kubva pane yako nyowani Galaxy S22 sarudzo.
Samsung Galaxy S22 yepamusoro chipikiri: Kana iwe uchinetseka kuwana zvinhu, swipe uchikwira kumusoro kubva pasi pechidzitiro kuti utange iyo app tray. Mukati meiyi mune yekutsvagisa kumusoro kumusoro, asi haingotsvage kuburikidza nemaapuro, inotsvaga kuburikidza nehuwandu hwemapurogiramu akabatanidzwa - kubva pakarenda kuenda kune zvigadziriso nezvimwe - saka pachave neboka rezvakasarudzika sarudzo kukurumidza kusvetukira kune chii. uri kutsvaga.
Maitiro ekudzima kana kudzosera iyo Samsung Galaxy S22: Izvo zvinoratidzika kune bhatani remagetsi kurudyi-kurudyi kwechero S22 handset (screen yakatarisana) inonyatso kutadza kuvhura Samsung's Bixby izwi mubatsiri. Kurumidza kudzvanya bhatani kunongokuendesa kune yekukiya skrini. Kuti udzikise pasi unozofanirwa kudzvanya-uye-kubata iri bhatani remagetsi uye vhoriyamu pasi kiyi panguva imwe chete (kwete kapfupi kudzvanya, sezvo izvo zvinongotora skrini), iyo inosimudza software skrini yakazara ne'Simba kudzima' , 'Restart', uye 'Emergency mode'. Kubva pane ino skrini iwe unogona zvakare kusarudza 'Side kiyi zvigadziriso' kugadzirisa zvakare kudzvanya kurefu kuti udarike Bixby uye kuunza simba rekudzima peji panzvimbo.
Samsung Galaxy S22, S22+ & S22 Ultra: Mazano ekumba sikirini
Batidza Android gesture navigation: Kusiyana nechero imwe foni yeAndroid muna 2022, iyo S22 inotakura makiyi matatu akapfava ekufambisa. Kana iwe uchida kuchinjira kumaitiro eAroid wobva watsveta pasi kubva kumusoro, vhura zvigadziriso (iyo diki cog kumusoro kurudyi)> ratidza> bhaa yekufambisa. Hongu, inzvimbo yechienzi kuti ionekwe. Kubva pano une sarudzo yekuchinja mabhatani' odha kana kusarudza 'Swipe gestures' pane kudaro.
Gadzirisa mabhatani ekufambisa: Kana iwe uchinamatira pa-screen navigation controls, unogona kugadzirisa marongero. Sezviri pamusoro, tungamira muzvirongwa > ratidza > bhatani rekufambisa uye unogona kushandura kurongeka kwemabhatani kubva kune yakasarudzika III  < kuenda ku <  III kuitira kuti bhatani rekumashure rive kune mhiri.
Rongedza yako chidzitiro imba: Kudhinda kwenguva refu pamadziro pane chero chidzitiro chekumba kunoita kuti ugadzirise iyo Wallpaper uye chimiro, dingindira, majeti, uye kuwana mamwe marongero. Iyi nharaunda ichaitawo kuti uwedzere zvidzitiro (svetukira kupeji nyowani uye worova hofori + mudenderedzwa), kana kudzima zvikirini zvakazara (rova marara can icon kumusoro, izvo zvinosimudza kukurumidza kukukumbira kuti usimbise kubviswa kwescreen) .
Shandisa Android 12 Material Iwe: Kuwedzera maitiro ekugadzirisa padanho rekuzvarwa Android 12, dzvanya-uye-bata iyo skrini yekumba kuti uvhure sarudzo. Wobva wadzvanya pawallpaper uye maitiro. Muchikamu chino - kunze kwekuchinja mapikicha kubva kune akasarudzika, anosanganisira animated 'vhidhiyo' sarudzo - iwe uchaona iyo sarudzo yeruvara palette (iyo inongoerekana yabuda mushure mekusarudza Wallpaper nyowani zvakare). Izvi zvinokutendera iwe kugadzirisa iyo mushandisi interface mavara zvichienderana newako Wallpaper. Kune zvakare sarudzo yekuisa iyo kumifananidzo, asi inongoshanda kune ekuzvarwa Samsung maapplication kana folda kumashure.
Tora zvimwe pane yako skrini yekumba: Iwe unogona kushandura saizi yechidzitiro gidhi panogara mapfupi ako uye majeti, zvichienderana nekuti gobvu raunoda kuti chidzitiro chemba ive. Dzvanya kwenguva refu pachiratidziro chekumba, wobva wasarudza 'Zvirongwa' kuzasi kurudyi (nemwewo swipe pasi kubva pamusoro pechidzitiro, sarudza iyo cog yezvigadziriso, wozoti 'Home skrini'). Pane sarudzo dze4 × 5, 4 × 6, 5 × 5 kana 5 × 6 iyo inogona kuiswa kuHome screen grid uye App skrini grid zvakaparadzana, nepo Folder grid ichipa 3 × 4 kana 4 × 4 kune ayo maapplication ari mukati. hurongwa hwefodha.
Maitiro ekuwana Google Discover: Ingo swipe kuruboshwe kuenda kurudyi pachiratidziri chekumba. Kana iwe uchida imwe sarudzo yeSamsung wobva wadzvanya-refu pachiratidziro chekumba uye swipe kurudyi kuti uwane peji rekuruboshwe. Pano iwe uchaona sarudzo pakati peGoogle Discover kana Samsung Yemahara, kana kurova chinja kumusoro kuti udzime peji rino zvachose.
Resize widget: Kuti uwane majeti, dzvanya chidzitiro chekumba uye sarudza 'Widgets'. Iwe unozofanirwa kuisa widget papeji yekumba kana anotevera mapeji usati wagadzirisa pazviri. Kana chero widget yaiswa, ingodzvanya-uye-kubata iyo widget pachayo, iyo inodhirowa muganho wakaitenderedza uzere neina denderedzwa 'dhonza mapoinzi'. Dhonza izvi mukati mezvimiro zviripo kuti uchinje saizi. Unoda kudzima widget? Dzvanya-uye-ibate, hwindo rinoyangarara richabuda richipa ruzivo uye gaba remarara rine 'Bvisa' pasi paro.
Gadzirisa mamiriro ebha: Iri ndiro ruzivo runogara pamusoro pechidzitiro. Musoro muzvirongwa> zviziviso uye unogona kusarudza pakati pe'Pfupi' uye 'Detailed' yekuona sarudzo. Unogona kuvhura 'Inosanganisirwa maapplication' uye wowedzera/bvisa kuti ndeapi maapplication anotenderwa kuratidzwa muzviziviso pane yega app hwaro zvakare.
Chinja huwandu hwekuzivisa kana kudzima zviziviso: Mukati mechikamu chekuzivisa (kuwana sezviri pamusoro) unogona kusarudza 'Advanced kuseta' kuti upe dzimwe sarudzo. Kubva pano iwe unogona kudzika kune matatu zviziviso zvidhori, akati wandei zviziviso chete, kana iwe unogona kusarudza kuona hapana kana zvese - sarudzo ndeyako.
Ratidza bhatiri sechikamu: Unoda kuona zvinopfuura kungomiririra inomiririra yehupenyu hwebhatiri? Iwe unokwanisa kushandura percentage counter, inoratidzika kudivi rebhatiri chiratidzo mubhawa yemamiriro, nekuenda kune marongero> zviziviso> magadzirirwo epamberi uye nekurova iyo 'Ratidza bhatiri muzana' shandura ipapo.
Bvumira peji rako reimba kuti rishande munzvimbo: Iyi sarudzo inobvumira iyo skrini yekumba uye tireyi yeapuro, zvigadziriso, nezvimwe, kuratidza mune yemamiriro ekunze. Yakadzima nekusarudzika, asi unogona kuibatidza muzvirongwa> zvigadziriso zvemba yekumba> sarudza iyo 'Dzungudza kune landscape mode' shandura. Izvi zvakasiyana kune 'mabhatani' mapfupi mukati meiyo swipe pasi zviziviso mumvuri, uko iyo 'Portrait'/'Auto rotate' sarudzo inongobvumira mamwe maapplication kuti atenderere pakati pematanho, kwete marongero uye nezvimwe.
Gadzira folda: Ingo dhonza imwe app pamusoro peimwe pane chero peji reimba skrini uye folda inogadzirwa. Kuti ubvise app kubva mufolda, vhura folda uye wodzvanya kwenguva refu app uye iwe unowana pop-up menyu iyo inokutendera iwe kuibvisa kana kuibvisa. Kuti uwedzere mamwe maapplication, anga adhonze mufolda, kana rova ​​​​bhatani re'+' mukati mefolda kuti uwedzere maapplication kwaunogona kusarudza akawanda kubva pane yako runyorwa.
Shandura ruvara rwefolda kana zita: Vhura folda uye isa zita raunoda kumusoro. Kana usingadi zita, siya risina chinhu uye hapana chinobuda. Kuti uchinje iyo folda yekumashure ruvara - uye iwe unogona kuita izvi wega pane dhairekitori - tora iyo dot pakona yekurudyi uye sarudza rutsva rutsva, kusanganisira yakazara tsika sarudzo.
Delete folda: Kana iwe usingachada folda, dzvanya uye ubate uye wobva warova marara icon. Iyo dhairekitori uye mapfupi eapp anonyangarika, asi haabvise akati maapuro, anongorongedza zvinhu pachikumbiro chako.
Vhara mapurogiramu ese: Paunobaya bhatani remaapps richangoburwa (iyo III softkey kana neinononoka kudzika-kusvika-pakati swipe kumusoro kana uri kushandisa gestures) unowana zvigunwe zveazvino mapeji eapp. Unogona kutsvaira izvi kure wega, kana kurova bhatani re'Vhara zvese' pazasi. Ziva, zvisinei, kuti kutsvaira app kuvhara hakuite kuti isashande kumashure - ona magadzirirwo ebhatiri redu ruzivo rwekuti todzora sei izvi.
Viga mapurogiramu: Haudi kuti app iratidze pane yako skrini yekumba kana mukutsvaga? Unogona kuzvivanza. Kureba chidzitiro chekumba, vhura zvigadziriso, sarudza 'Viga maapplication' uye sarudza iwo ausingade kuoneka, usati warova 'Waita'. Caveat: kutsvaga kucharamba kuchiratidza kuwanikwa kwezvirongwa zveapp mune dzimwe nguva.
Sarudzo dzekubatanidza pane iyo Galaxy S22 yakatevedzana
Maitiro ekuseta eSIM: Kana eSIM yakabatidzwa pamudziyo wako, unozokokwa kuti uise izvi paunotanga kuseta mudziyo. Kana uchida kuzviita mushure mekutanga kuseta, musoro muzvigadziriso> zvinongedzo> SIM kadhi maneja> wedzera nharembozha.
Mashandisiro aungaita Samsung DeX: Chiitiko chedesktop (DeX) chinhu chakajairwa paGalaxy S22, chinokutendera kushandisa foni yako sekombuta yedeskop kungave nePC kana neTV kana yekutarisa. Kutanga iwe unofanirwa kubatidza DeX parunhare muzvirongwa> advanced maficha> Samsung DeX. Kana wangoibatidza, unotofanira kudaro gadza iyo Samsung DeX app paPC yako kana iwe uchafanirwa kubatanidza iyo yekutarisa kune yako foni kuburikidza ne USB-C yekubatanidza pazasi. Ichashanda zvakare kuburikidza neUSB-C hubs.
Fona uye mameseji pane mamwe madivayiri: Uchishandisa iyo Samsung account, unogona kubvumira mafoni uye mameseji kuti auye kuburikidza nemamwe maScams madhiraivhu, kunge piritsi, zvichireva kuti haufanire kuchinja zvishandiso nguva dzese kana uchishanda. Musoro muzvirongwa> zvemberi maficha> kufona uye kutumira mameseji pane mamwe madhivha uye kuibatidza. Izvi zvinoreva magwaro uye kufona kunhamba iri pafoni yako ichaenderana neyako mamwe maSamsung.
Link to Windows: Kana iwe uchida kuwiriranisa kune a Windows PC yekubata zviziviso zvenhare, kuona mafoto achangoburwa, kufona uye kugamuchira mafoni kuburikidza nePC, kuwana mameseji / hurukuro, uye sync nharembozha, unogona kuzviita. Musoro muzvirongwa> advanced features> Link to Windows uye woibatidza. Iwe unozotorwa kuburikidza nekugadzirisa maitiro.
Manage Android Auto pane yako Samsung chishandiso: Nhare dzeSamsung dzinokutendera iwe kugadzirisa iyo Android Auto ruzivo. Musoro muzvirongwa> zvimiro zvemberi> Android Auto. Pano unogona kugadzirisa maapplication aunoratidzwa muAuto Auto pamwe nekushandura mamwe marongero.
Kugadzirisa vabatsiri vako veDigital paGPS S22
Samsung inosundira Bixby semubatsiri wayo wedhijitari. Sezvo iyo S22 iri Android yaunowana Google Assistant zvakare. Isa Amazon Alexa uye iyo inova sarudzo zvakare. Heano ese ekutonga sarudzo kune avo chaiwo vabatsiri.
Svika Google Mubatsiri: Kudzvanya kwenguva refu pane virtual on-screen softkey kuchavhura Google Assistant. Kana iwe uri kushandisa gestures saka 45-degree kona swipe ichaita zvakafanana. Izvi zvinowiriraniswa neakaundi yako yeGoogle kubva pakusaina, saka inoshanda nechero chinhu chawakatoseta Google Mubatsiri kuita.
Batidza "Hey/Ok Google" hotword: Izwi rinopisa rekuita kuti Google ipindure nezwi rako chete chikamu cheGoogle app. Iwe unokurudzirwa kuti uimise kana iwe uchinge wasaina-in kufoni nyowani, asi kana iwe uchida kuzviita gare gare tsvaga 'Chishandiso chekubatsira app' kubva kune zvigadziriso (inowanikwa muzvirongwa> maapplication> sarudza default apps), rova ​​​​zvirongwa. cog padivi peizvi, uye iwe uchakwanisa kumisa hotword kuburikidza neVoice Match.
Dzima Google Mubatsiri / vese vabatsiri: Kana iwe usingade Google Mubatsiri pane iyo yekumba bhatani nzira, unogona kubvisa kugona kuivhura. Sezviri pamusoro, tungamira muzvirongwa> maapplication> sarudza default apps, sarudza 'Digital mubatsiri app' uye tora 'Chishandiso chekubatsira app'. Unogona kusarudza 'Hapana' yekudzima, kana imwe sarudzo yekuchinja iyo default system.
Chinja mubatsiri wako wedhijitari: Kana iwe uchida kuvhura Alexa pane bhatani repamba, isa iyo Alexa app uye ipapo, sezviri pamusoro apa, chinja iyo default mudziyo wekubatsira app ku Alexa - kana Bixby Voice kana uchida. Nekudaro, iyo Alexa hotword haishande.
Tanga Bixby Izwi: Kana iwe uchida kushandisa Bixby, dzvanya uye bata bhatani repadivi uye Bixby ichavhura. Iwe unozofanirwa kupinda-mukati kune Samsung account shandisa Bixby. Iwe unogona zvakare kugonesa iyo "Hi Bixby" inopisa izwi.
Samsung Galaxy S22: Kurumidza kuseta matipi uye mateki
Pakarepo pinda iyo inokurumidza kurongedza uye chiziso pane pane yako skrini yekumba: Svetera pasi pese pachiratidziri chekumba uye mimvuri yekuzivisa inotsvedza pasi - zvichireva kuti haufanirwe kutambanudza kumusoro kwepeji. Svetera pasi zvakare uye uchawana mabhatani ekukurumidza kuseta - anobatsira chaizvo pane hombe Galaxy S22+ uye S22 Ultra mafoni. Iwe unogona kudzima izvi (sezvo zviri kuitika nekusarudzika) asi uchidzvanya pachiratidziro chemba, uchirova magadzirirwo cog, wobva watsikitsira pasi kune 'Swipe pasi kune ziviso pani' toggle.
Kukurumidza kuwana kuGoogle Kumba kudzora: Kana iwe uine Google Home yakaiswa uye kuseta, donhedza iyo yekukurumidza kuseta menyu uye wobva wadzvanya 'Chishandiso chekudzora'. Zvino tora iyo yekudonha-pasi menyu sarudzo inoti 'SmartThings', uye iwe unofanirwa kuona 'Kumba' senge sarudzo. Sarudza izvo uye ikozvino uchaona hombe pascreen widget zvinodzora zveGoogle Home yako yakabatana zvishandiso.
Gadzirisa nekukurumidza zvigadziro: Kuti uchinje mapfupi aunoona paunotsvaira pasi zviziviso, swipe pasi kaviri kuti uone gidhi yakazara yemabhatani, vhura menyu nekudzvanya madotsi matatu kumusoro kurudyi uye sarudza "mabhatani ekugadzirisa". Ucharatidzwa runyorwa ruzere rwesarudzo pamapeji ese. Unogona kudhonza kuti urongedze, kana kubvisa mapfupi ausingade. Nzvimbo yepamusoro: maapplication matanhatu ekutanga chete anoratidzwa mukompakiti yekuona pamusoro (ichiwedzera kusvika gumi nemasere kamwe mukukurumidza zvigadziriso zvizere), saka ita aya ako ekutanga mapfupi mapfupi.
Svika zvakabatana zvishandiso mune inokurumidza kugadzirisa pane: Nekumisikidza iwe uchaona kuti kutonga kwemudziyo uye kubuda midhiya kunoratidzwa mune yekukurumidza kuseta pane. Izvi zvinoreva kuti unogona kutsvaira pasi uye nekubaya kuti uwane mimhanzi yauri kutamba kana masipika auri kubatana nawo, pamwe nekudzora midziyo yemumba yakangwara sezvatsanangurwa pamusoro. Kana iwe usingade izvi, unogona kuzvidzima nekuvhura zvigadziriso zvekukurumidza uye kubaya menyu kumusoro kurudyi. Wobva wadzvanya pa 'Kurumidza pani dhizaini', 'Chishandiso chekutonga uye Media inobuda mabhatani' uye sarudza yako yaunoda sarudzo.
Kurumidza kugadzirisa chimiro chinopenya: Samsung inokutendera iwe kuti uwane kupenya kuburikidza nekukurumidza kuseta pani, ingo tsvaira pasi uye uchaona inotsvedza. Kana iwe uchida kugadzirisa autobrightness, vhura iyo menyu kurudyi-kurudyi kumagumo kweinotsvedza uye ichakutora iwe wakananga kune iwo marongero, kwaunogona kuibatidza kana kuidzima.
Samsung Galaxy S22 uye S22 + app matipi
Ratidzai mapurogiramu ese ari pane yekuvhara kumba: Iyi isarudzo yakakurumbira kune vamwe. Kana iwe uchida kubvisa tireyi yeapps, dzvanya pahwindo remba uye tinya marongero. Wobva wasarudza 'Kumba skrini yekumisikidza' uye sarudza 'Kumba skrini chete'.
Wedzera kana bvisa bhatani rebhatani reapps: Nekumisikidza hapana bhatani retiyeti yeapp uye unovhura tireyi yeapps ne swipe. Kana iwe uchida kuti bhatani ridzose musoro muzvigadziriso zvemba sezviri pamusoro uye sarudza iyo 'Ratidza maapplication skrini bhatani paimba skrini' shandura.
Swipe kuratidza kana kuvanza mapurogiramu eapp: Sezvo pamusoro, iyo Galaxy S22 inoita kuti iwe utarise iwo maappuro tray neswipe kumusoro. Iwo maapplication mapeji pachawo anotenderera kuruboshwe uye kurudyi. Kana iwe uchida kudzokera kune peji remba, haufanire kudzvanya bhatani repamba, unogona kungo tsvaira kumusoro zvakare uye iyo tireyi tireyi inonyangarika.
Alphabetise kana tsika kurongedza maapplication ako: Mutirayi yemaapps, rova ​​​​matatu madoti menyu muFinder (yekutsvaga bha) kumusoro kurudyi, wobva wasarudza 'Ronga kubva pane yekudonha rondedzero. Izvi zvinokupa iwe sarudzo yekuve nealfabheti kurongeka. Kana kuti sarudza 'Custom order' uye unogona kubva wadhonza maapps ako munzvimbo dzaunoda.
Gadzira dhaireti yetrayipi yeapps: Iwe unogona kuve nefolda ine akawanda maapplication kunyangwe iwe wakagadzirirwa kutsika kana alfabheti kurongeka mutireyi yemaapp. Ingo dzvanya-uye-kubata chiratidzo cheapp uye woidhonza pamusoro peimwe uye folda ichagadzirwa mukati meiyo app tray. Iwe unogona ipapo kugadzirisa zita uye ruvara sezvaunoda - sezvaunokwanisa pazviratidziro zvekumba.
Rega Tsvaga ikupe mazano ezveapp: Kana iwe uchibaya paFinder (yekutsvagisa bhaa) kumusoro kwetireyi yemapurogiramu, iwe unobva wangowana mazano anoenderana neazvino maapplication awakashandisa. Kana iwe usingade izvi, sarudza katatu dot menyu kwaunogona kudzima marongero akasiyana: akakurudzirwa maapplication, mazano ekutsvaga, akakurudzirwa marongero, Dhawunirodha & Screenshots, nhoroondo yekutsvaga, uye akavanzika maapplication.
Uninstall maapplication: Iwe unogona kusunungura zvakananga kubva kune app icon. Ingodzvanya kwenguva refu paapp uye pop-up menyu inokupa iyo sarudzo yekubvisa. Kana iri yakakosha app (yausingakwanise kuburitsa) iyo imwechete sarudzo inokurega iwe uchidzima app.
Wedzera zvirongwa kune yako skrini yekumba: Dzvanya uye ubate pachidimbu cheapp mutireyi yemaapps. Iwe unogona kusarudza 'kuwedzera kumba' kubva pane pop-up menyu inoonekwa.
Rega kuwedzera mifananidzo mitsva yeApple kumba. Tungamira mukati mezvirongwa zvemba skrini (refu dzvanya pamadziro, rova ​​​​masetiroti cog) uye iwe unowana iyo 'Wedzera maapplication matsva kuchiratidziro chemba' chenji. Yakadzima nekusarudzika, asi kana iwe uchida kuti yega yega yekuisirwa ionekwe pazviratidziro zvako zvemba zvino izvi zvinogonesa izvo.
Chinja chisarudzika Android inokutendera kuti usarudze kuti ndeipi iyo default app kana uine anopfuura imwe chete ichaita chinhu chimwe chete. Enda kune zvigadziriso> mapurogiramu> Default apps. Pane zvingasarudzwa zvebrowser, caller ID/spam, mubatsiri, Imba, Runhare, SMS uye zvinongedzo.
Dzora mvumo yeapp: Android inokutendera kuti utore mvumo yese yeapp yega yega pane yega. Enda kune zvigadziriso> mapurogiramu uye sarudza iyo app yaunoda, wobva warova Mvumo. Izvi zvinokutendera kuti uchinje mamvumo nekudzima, kuti ugone kudzima nzvimbo kana maitirwo ekuwana, semuenzaniso. Kuita izvi kunogona kuita kuti app iite shoma kana kuti irambe ichikukumbira mvumo, zvakadaro, saka ramba uchifunga izvi.
Govera zvibvumirano zvezvishoma-zvinoshandiswa maapplication: Sezviri pamusoro, maapplication ega ega anorasikirwa nemvumo kana akasashandiswa kwenguva yakareba - yakagadzirirwa kusunungura nzvimbo. Kana iwe uchiziva kuti pane imwe app yaungango shandisa kaviri pagore, enda kune zvigadziriso> maapplication, sarudza iyo app wobaya Mvumo, wobva wabaya bhatani rekuti 'Bvisa mvumo uye sunungura nzvimbo'.
Samsung Galaxy S22: Kiya chidzitiro uye nguva dzose-pakuratidzira
Iyo yekukiya skrini ndiyo yauchaona kana foni yako yakakiiwa. Yakakamurwa kuita zvikamu zviviri: chimwe kana chidzitiro chakadzimwa - uko "nguva dzose-pakuratidzwa" inogona kukupa ruzivo - kana iyo yekukiyiwa skrini iyo skrini yakabatidzwa zvizere, asi haugone kuwana mudziyo.
Batidza chiratidziro chinogara chiripo: Kuita kuti chidzitiro chiratidze iwe nguva dzose-paruzivo, tungamira muzvirongwa> kukiya skrini, uye shuwa kuti 'Nguva Yese Pakuratidzwa' inobatidzwa pairi - izvo zvazvinoita. Kurova iyi kuseta kunobvumidza iwe kuseta hurongwa, kuratidza kune zvitsva zviziviso, kana kuratidza nguva dzose. Ingo rangarira kuti inoshandisa bhatiri, saka kuenda pamusoro kuti mudziyo wako uvheneke-up kune ese chiitiko kunoderedza hupenyu hurefu.
Shandura maitiro anogara achiwachi: Kune akasiyana emhando dzewachi dzakasiyana dzeiyo S22 inogara ichiratidzwa. Musoro muzvirongwa> kiya chidzitiro> gara uchiratidzwa> wachi. Iwe unogona kusarudza rudzi rwewachi, wedzera 'Image wachi', uye zvakare shandura mavara.
Wedzera majeti kune yako yekukiya skrini kana inogara-pane inoratidzwa: Samsung inobvumira majeti pane yako yekuvhara skrini kana inogara-pakuratidzwa. Iwe unogona kunge uine mimhanzi controller ipapo nekukasira, asi kana ukasadaro, tungamira muzvirongwa> kukiya skrini> majeti. Pano iwe unowana ese sarudzo dzekubatidza nekudzima, kusanganisira Bixby Routines, Voice Recorder, mamiriro ekunze, maaramu nezvimwe.
Chinja kupenya kwerinoratidzwa nguva dzose: Izvi zvakabatana nekupenya otomatiki pafoni yako, zvisinei iwe unogona kukwira nemaoko izvi. Musoro muzvirongwa> kiya chidzitiro> nguva dzose-pakuratidzwa. Mukati memenyu iyi uchaona 'Auto kupenya. Dzima izvi uye unogona kuseta kupenya iwe pachako, kunyanya kune inogara ichiratidzwa. Iwe unogona zvakare kushandura kupenya nemaoko nekudzvanya pane inogara-pakuratidzira kana ichinge ichitaridza.
Shandura kukiya chidzitiro mapfupi: Iwe unogona kuve nemapfupi maviri pakiyi skrini yekukurumidza kuwana (chete yekukiya skrini, kwete iyo inogara ichiratidzwa). Idzi ndidzo foni uye kamera nekukasira, asi inogona kuve chero app yaunoda. Musoro muzvirongwa> kukiya skrini> mapfupi. Pano unogona kusarudza mapfupi ekuruboshwe nekurudyi, kana kudzima zvachose kuburikidza nekuchinja.
Dzivirira / gonesa zvidzitiro zvekuvharira skrini: Kana iwe usingade zviziviso pane yako yekuvhara skrini, tungamira kune zvigadziriso> kukiya skrini> zviziviso. Izvi zvinokutendera kuti uratidze icon chete zviziviso, zvizere zvizere, kuvanza zvirimo, uye sarudza kana zviziviso zvichiratidzawo pane zvinogara zvichiratidzwa. Zvinotogoneka kugadzirisa kujeka kwechiziviso chemashure/chinyorwa uchishandisa inotsvedza.
Ratidza wachi inotenderera panevharo rekukiya: Kana iwe uchifamba uye nguva yeko iri kuratidza, asi iwe uchida kuona yako yekumba nguva futi, tungamira muzvirongwa> kukiya skrini> wachi inotenderera. Iwe unogona zvakare kusarudza kuti nguva yekumba yako yakasetwa uye gadzirisa izvi sezvaunosarudza.
Samsung Galaxy S22: Chengetedzo uye kuvhura
Nzvimbo yepamusoro yekuchengetedza: Biometrics haina kupusa, nekuti kana yakundikana mudziyo wako unodzokera kuPIN kana password kuti uvhure. Naizvozvo, mudziyo wako wakachengeteka chete sepassword kana PIN yaunoshandisa, sezvo chero munhu ari kuedza kupaza mufoni yako anogona kugara achisarudza kunanga nzira idzi dzekuvhura.
Ita kuti zvigunwe zvigunwe kana kuchengetedzwa kwechiso: Kuti ushandise zvigunwe zvako kana chiso kuvhura, tungamira muzvirongwa> biometric uye chengetedzo. Pano iwe unogona kunyoresa chiso chako kana zvigunwe (kana akawanda maprints). Iwe unozofanirwa kuseta yekudzosera PIN kana password panguva imwe chete kuti upe kumwe kuchengetedzeka. Nzvimbo yepamusoro: kana uchishandisa zvigunwe, wobva wanyoresa zvigunwe paruoko rumwe norumwe kuti ugone kuvhura zvisinei iwe wakabata foni yako.
Instant Lock: Paunodzvanya bhatani rekumira, iwe unoda kuti foni yako ivhare ipapo ipapo. Musoro muzvirongwa> zvechizarira sikirini> chengetedzo yekukiya masystem. Iko kune sarudzo yekukiya iyo mudziyo nekukurumidza kana iyo skrini ichienda kunorara kana kana iwe ukadzvanya bhatani rekumira. Kana iwe uchida kunonoka, pane yakawanda nguva sarudzo.
Pukuta otomatiki mudziyo wako (mushure mekunge akawanda atadza kupinda): Kwete marongero atingakurudzira kushandiswa kwakawanda, asi unogona kuita kuti foni igadzirise fekitori, kusanganisira kudzima maapplication ako ese uye data, mushure mekuedza gumi neshanu kutadza kuvhura mudziyo. Izvi zviri mune imwecheteyo Chengetedza kukiya marongero sepazasi muromo.
Smart Lock / Bluetooth kuvhura: Zvekare muzvigadziriso> kukiya skrini> pane iyo Smart Lock chikamu. Ichi chinhu chakajairwa cheAroid uye une sarudzo yekusarudza zvigadziriso zvinovimbwa, saka Android mudziyo wako unozovhura kana wabatana nechimwe chinhu - unogona kudoma midziyo yeBluetooth, senge smartwatch yako kana mota. Kune zvakare 'Nzvimbo dzakavimbika' uko hwaro hwenzvimbo inochengeta mudziyo wakavhurwa. Kune zvakare 'Pa-muviri kuona' kuitira kuti mudziyo wako urambe usina kukiiwa kana uri pamunhu wako.
Kiya network uye kuchengetedza mabasa: Iyi sarudzo ichareva kuti network yako marongero haigone kuchinjwa foni yako yakakiiwa. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kutsvaga foni yako kana yakabiwa. Nekudaro, zvinoreva zvakare kuti unofanirwa kuvhura foni yako kuti ubate maitiro ekubhururuka. Musoro muzvirongwa> kiya chidzitiro> chengetedzo yekiyi kuti uwane sarudzo yekuibatidza kana kudzima.
Samsung Galaxy S22 kuratidza matipi
Ese maturusi eGalaxy S22 ane adaptive yereti yekuzorodza skrini, asi iwe unogona kugadzirisa aya marongero futi.
Pinda 120Hz maitiro: Kune maviri ekuratidzira modhi - Adaptive kana Standard. Iyo yakajairwa modhi inonamira ku60Hz, iyo inoshanduka yakatsetseka ichasarudza yakakodzera mwero wekuzorodza kubva ku10-120Hz. Kukurumidza kufefetedza kunoreva kupfava inokurumidza kufamba zvinoonekwa, asi inogona kushandisa bhatiri rakawanda. Chakanakira adaptive ndechekuti inogadzirisa iyo bhatiri kudiwa kwako. Unogona kuwana sarudzo muzvirongwa> kuratidza> kufamba mushe.
Shandura iyo resolution resolution: Iyo Galaxy S22 Ultra ine sarudzo yekushandura sarudzo pakati pezvitatu zvingasarudzwa: WQHD+ (3088 x 1440), FHD+ (2316 x 1080), HD+ (1544 x 720). Musoro muzvirongwa> ratidza> screen resolution uye iwe unowana idzi sarudzo. Iko hakuna smart resolution kugadzirisa senge mimwe michina inopa kumwe kunhu. Sarudzo sarudzo dzeiyo base S22 uye S22 + dzinosiyana hongu.
Shandisa maitiro akasviba: Vhura zvigadziriso menyu uye sarudza kuratidza. Ndicho chinhu chekutanga chauchaona kumusoro kwepeji pa'Chiedza' uye 'Rima' rizere nemifananidzo. Unogona kuronga yakasviba modhi nekusarudza iyo 'Rima modhi marongero' pazasi iyi mifananidzo inooneka.
Shandura mavara ekuratidzira: Musoro muzvirongwa> ratidza> skrini modhi. Pano iwe unowana sarudzo yekushandura nzira iyo chiratidziro chinotaridzika, kubva kuVivid kuenda kuMasikirwo, ine inodziya / inotonhorera chena chiyero inowanikwawo kune manual tweaking. Kune zvigadziriso zvepamberi, zvekudzora dzvuku, girinhi uye bhuruu chiteshi mumwe nemumwe, zvakare, kana iwe uchida kunyatsodzika dive.
Vhura vhidhiyo inowedzera: Pane vhidhiyo inosimudzira yakavanda paS22 iyo ine chinangwa chekusimudzira yako vhidhiyo yekuona ruzivo. Inoshanda nehuwandu hwemaapplication, anosanganisira Netflix, Prime Vhidhiyo uye YouTube. Musoro muzvirongwa> advanced features> vhidhiyo kupenya. Pane zvingasarudzwa zve Normal kana Bright.
Vhura ziso kunyaradza nhovo: Izvi zvinoshandura ruvara rwechiratidziro kuti uderedze mwenje webhuruu, dzivirira kushushikana kwemaziso uye nekukubatsira kurara zvirinani, zvine musoro. Musoro muzvirongwa> ratidza uye shandura pa 'Ziso nyaradzo shield'. Kudzvanya mune iyi marongero uye iwe unogona kuwana inoshanduka kana tsika modhi, saka iwe unogona kusarudza kuti uishandise nguva dzese kana kubva pane yakatarwa nguva.
Mamwe-ruoko maitiro: Musoro muzvirongwa> epamberi maficha> uye shandura pa'One-ruoko modhi'. Izvi zvinoderedza chiratidziro kuti zvikupe iwe kuwana nyore kuzvinhu zviri padyo nepamusoro - zvakanakira maoko madiki pamafoni makuru. Kamwe mune imwe-ruoko modhi, unogona chinja kubva kuruboshwe kuenda kurudyi nekudzvanya miseve. Kuti ubude neruoko-rumwe modhi, ingobaya panzvimbo dema.
Mashandisiro ekushandisa iyo S Pen neiyo S22 Ultra: Iyo S22 Ultra inouya neyakavakwa-mukati S Pen stylus. Ibudise kunze uye iwe unogona kuishandisa kupindirana nechiratidziro pane chigunwe. Kurodha maapplication ayo akasiyana-siyana anoenderana pane kakuvhura kadiki kanoyangarara nechepakati kurudyi, iyo inovhura mukana weGadzira chinyorwa, Wona zvese manotsi, Smart sarudza, Screen kunyora, Live mameseji, AR Doodle, Shandura, PENUP, uye sarudzo yekuwedzera. kudyidzana kwakawanda.
Samsung Galaxy S22: Zviziviso matipi uye matipi
Kudzima zviziviso zveapuro: Enda kune zvigadziriso> zviziviso uye iwe uchaona chikamu che'Chichangobva kutumirwa'. Tinya 'zvimwe' uye iwe unowana nyore kushandura sarudzo kune ese maapplication ari pafoni yako (kunze kwekunge wasarudza kuavanza, kana zvakadaro haungadaro). Iwe unogona zvakare kubaya kuburikidza neapp kuti udzore zvakatemwa, kubva ku 'Deliver chinyararire' kune zvimwe zvakatsanangurwa paapp.
Ratidza mabheji eiyo icon yeApp: Icon mabheji chinhu che Android, ichirega yega yega app ichikuudza kuti zvingani zviziviso zvaunazvo. Samsung inoshandisa izvi pane ese mudziyo. Musoro muzvirongwa> zviziviso> zvigadziriso zvepamberi uye shandura 'App icon mabheji' kana usingadi. Tinya mugadziriro iyi kana iwe uchida kuchinja pakati pechiziviso chinoratidza sechingori kana doti kana doti rine nhamba kuratidza kuti zvingani zviziviso.
Wona ziso rako rekuzivisa nefoni refu pakapurogiramu yeapp: Uku ndiko kuwedzeredzwa kwepamberi kweiyo icon mabheji. Iwe unogona kudzvanya uye kubatirira pane app icon inoratidza bheji uye zviziviso zvicharatidzwa mune pop-up menyu. Musoro muzvirongwa> zviziviso> mabheji e-app icon uye iwe unowana iyi sarudzo pazasi peji sekushandura.
Regedza ziviso yawakagamuchira: Ichi ndicho chimiro cheAndroid, asi chakachinja mu Android 12. Kana iwe wakawana chiziviso uye iwe uchida kudzima zviziviso zveramangwana kana kushandura kuti zvinounzwa sei, dzvanya uye ubate pachiziviso ichocho. Ichawedzera kukupa sarudzo, kusanganisira "dzima zviziviso". Kusarudza 'Zvirongwa' zvinokutora iwe mune yakadzama menyu umo yese inowanikwa inogona kuchinjwa.
Samsung Galaxy S22 vhoriyamu inodzora, inonzwika uye usakanganise
Kudzidza kugona kusakanganisa hunyanzvi hwe Android. Unogona kuiwana kuti ikupe zviziviso zvaunoda paunenge uchizvida, unogona kunyararidza foni yako paunoda usingade inotsvedza, asi zvakadaro rega izvo zvakakosha zviziviso zvipfuure. PaGalaxy S22 une mavhoriyamu mashanu anotsvedza: system, Bixby, ringtone, midhiya, zviziviso.
Tenzi midhiya vhorumu tendeuka: Mukati mezvigadziriso zvevhoriyamu (zvigadziriso> ruzha uye vibrations> vhoriyamu) iwe unowana iyo sarudzo 'Shandisa Vhoriyamu makiyi emedia'. Izvi zvinobatika nekusarudzika uye zvinoreva kuti kana ukadzvanya mabhatani evhoriyamu, vhoriyamu chete yemedia ndiyo inofamba, semimhanzi yako. Idzima uye inodzora ringer vhoriyamu, asi inochinja kune midhiya vhoriyamu kana iwe uchiridza midhiya, semuenzaniso muNetflix kana Spotify.
Chinja huwandu hwe vibration kune zvese: Musoro muzvirongwa> manzwi uye kudedera> vibration kusimba uye iwe wega unogona kushandura mazinga ekudedera ekufona, zviziviso uye kubata kubata.
Dzima ruzha rwekuchaira, kusunungura ruzha, keyboard kurira: Samsung yaizove neGirazi yako beep uye ichidedera pane zvese chiito uye kubata. Musoro muzvirongwa> ruzha uye kuzunungusa> system ruzha/vibration control.
Gonesa uye kudzora Dolby Atmos: Izvi zvinogona kuchinjirwa mukumisikidza nekukurumidza, kana kutungamira muzvirongwa> manzwi uye kudedera> ruzha rwemhando nemhedzisiro. Dzvanya muchikamu cheDolby Atmos uye iwe une sarudzo ye auto, bhaisikopo, mimhanzi kana izwi sekusimudzira kwega. Usati wapinda mune iyi menyu kune zvakare yakaparadzana 'Dolby Atmos yemitambo' yekuchinjisa, saka iwe unogona kungoita iyo moto-up paunotanga mutambo.
Gadzirisa iyo EQ (yakaenzana): Haufarire iyo default sound profile? Unogona kuchichinja. Musoro muzvirongwa> manzwi uye kudedera> ruzha rwemhando nemhedzisiro> yakaenzana. Izvi zvinopa zvishanu presets uye imwe Tsika sarudzo, saka iwe unogona kugadzirisa kuburikidza mapfumbamwe mitsara mabhendi kuti utore ruzha rwembiri sezvaunoda (kubva pa63Hz kusvika 16kHz).
Gadzirisa ruzha rwekuoma kwekunzwa: Musoro muzvirongwa> manzwi uye kudedera> ruzha rwemhando nemhedzisiro> gadzirisa ruzha. Izvi zvinopa frequency boosts zvichienderana nezera, fungidziro yekuti kupihwa frequency mabhendi kunodzikiswa mune mamwe mazera mapoka. Iwe unogona zvakare kushandisa 'Edza kunzwa kwangu' kuongorora iyo inosimudzira yekushandisa, kana iripo.
Shanda usakanganise: Usavhiringidze chinhu cheAroid chinokutendera kuti unyaradze foni yako, asi unogona kuseta zvakati wandei. Swipe pasi zvigadziriso zvinokurumidza uye baya bhatani rekuti usavhiringidze kuti ubatidze. Iwe unogona zvakare kudzvanya-uye-kuibata kuitira kuseta hurongwa uye kubvumidza kwakati kukanganisa kubva kumafoni, maalarm, maapplication uye zvichingodaro. Iwe unogona zvakare kuwana izvi kuburikidza nezvirongwa> zviziviso> usakanganisa.
Bvumira maaramu uye kunze mune usakanganise: Sekureva zano riri pamusoro.
Bvumira zviziviso mukati kuti zvisakanganise: Nepo manzwi uye kudedera zvakanyaradzwa, unogona kuramba uine zviziviso zvinyararire. Enda kune zvigadziriso> zviziviso> usakanganisa> viga zviziviso. Pano iwe unogona kudzora kana kuvanza zvese, kana iwe uchida yakazara-skirini zviziviso, mabheji e-app icon, ratidza mune yekuzivisa panhi, kumisa pop-up zviziviso, uye kuvanza mamiriro bar icons.
Mazano eGame Booster
Deredza mwero wekuvandudza kuti uchengetedze bhatiri: Vhura iyo Game Launcher app iyo katatu mutsara menyu pazasi kurudyi. Rova 'Game Booster' kubva pane zvingasarudzwa zvinouya. Unogona kuwana 'Low refresh rate', iyo inogadzirisa mwero wekuzorodza kusvika ku48Hz panguva yemitambo kuchengetedza hupenyu hwebhatiri.
Bvisa kufamba kwemasaini mumitambo: Ichi chinhu chikuru kukumisa netsaona uchisiya mutambo uchitamba nekuti swipes ako akadudzirwa zvisizvo. Enda kuGame Booster marongero sezvakatsanangurwa pamusoro, wozosarudza 'Vimba panguva yemutambo'. Pano iwe unogona kudzima ma gestures ekufamba (zvinozoitwa greyed kana uri kushandisa Android's softkeys hongu). Kuti ubude mumutambo unotofanira kutsvaira kaviri.
Bvisa autobrightness panguva yemitambo: Hapana chimwe chinhu chinogumbura kupfuura kupenya kwako kuderera paunenge uchitamba. Mune menyu yakatsanangurwa pamusoro apa iwe unogona zvakare kusarudza kuvharira autobrightness kudzivirira iri dambudziko.
Vhura Dolby Atmos yekutamba: Musoro muzvirongwa> manzwi uye mavhitaminzi> ruzha rwemhando nemhedzisiro. Iwe uchaona iyo 'Dolby Atmos yemitambo' shandura pano.
Mashandisiro ekushandisa iyo screenrecorder: Pane yakavakirwa-mukati skrini rekodhi pane iyo S22 yakatevedzana, inowanikwa kuburikidza nekukurumidza kuseta. Ingo swipe pasi, wobva watsvaira zvakare kuti uvhure mabhatani akazara gumi nemasere, kwaunogona kusarudza Screen rekodhi. Dzvanya-uye-bata iyi icon kuti igadzirise zvayo, senge mhando yevhidhiyo uye ruzha (kubva kune midhiya uye/kana mic kana hapana).
Samsung Galaxy S22: Kamera uye mapikicha mateki
Makamera pane akasiyana S22 zvishandiso zvakasiyana, iyo S22 Ultra ari mambo wevatatu. Asi pane zvakawanda zvavanofanana uye zvakawanda zvekuwana kubata nazvo.
Shandisa iyo 108MP modhi (S22 Ultra chete): Iyo S22 Ultra ine 108-megapixel kamera, asi nekukasira yakagadzirirwa kubuda pagumi nemaviri-megapixels. Kana iwe uchida chigadziriso chizere, dzvanya bhatani reyero muapp yeKamera uye iwe uchaona iyo '12: 3 4MP' sarudzo. Ongorora: haugone kupfura pa108MP muS108 uye S22+ sezvo vaine 22MP main sensors.
Vhura 8K vhidhiyo yekutorwa: Kana iwe uchida kutora vhidhiyo mune yepamusoro resolution, tungamira muvhidhiyo modhi mukati meKamera app uye tinya chiratidzo chechiratidzo - uchaona sarudzo ye8K 24.
Batidza maitiro ekupfura: Chinhu chakaunzwa kumashure paS10, inoongorora chiitiko ichi uye ichipa yakanakisa kuumbwa. Iyo kamera icharatidza pfuti yakanakisa yaungatora uye nekukubatsira iwe kumisa mutsetse uchishandisa gwara pachiratidziro. Vhura iyo Kamera app uye tinya iyo kuseta cog uye iwe unowana iyo sarudzo yekubatidza.
Shandisa chiitiko chinogadzirisa mifananidzo yako: Iyo scene optimiser inoshandisa artificial intelligence (AI) kuvandudza mafoto ako, pamwe nekubvumira mafoto ehusiku akareba. MuKamera app sarudza iyo yekuseta kodhi kumusoro kuruboshwe, wobva wabatidza 'Scene optimiser'. Paunenge watora pfuti unozoiona otomatiki pamberi pemeso ako, iine mbiri mbiri denderedzwa chiratidzo chinoratidza kuti kamera yaita optimizations.
Shandisa usiku maitiro ezvepamusoro mwenje wepazasi shoti: Modhi yehusiku inotora kuratidzwa kwenguva refu muchiedza chakaderera uye inobatidza otomatiki - iyo yaunogona kuona kana chiratidzo chemwedzi chiri kuratidzwa neyero kukona yepasi yekurudyi yeCamera app's viewfinder. Tinya iyi icon yemwedzi, woshandura chena, uye yakadzimwa.
Nzira yekubuda nayo mumodhi: Kana ukasarudza modhi yekamera - kubva ku'More' menyu, semuenzaniso - uye uchida kudzokera kune default, hazvisi pachena kuti mazwi aya sei. Kana iwe uine gesture control yakabatiswa saka uchafanirwa kutsvaira kudzokera kune yakajairwa yekuona, zvikasadaro shandisa iyo Android softkey back bhatani (kana iwe uri mune default Photo mode, zvisinei, bhatani rekumashure rinovhara iyo Kamera app).
Kurumidza kuvhura kamera: Nekumisikidza, kudzvanya kaviri pabhatani repadivi kunovhura kamera. Kana iwe uchida kushandura izvi kuti, iti, vhura imwe app, wobva watungamira muzvirongwa> advanced features> side key.
Chinja macamera kamera: Iwe unogona kutsvaira nemamodhi kubva kuKamera app yekuona: Mufananidzo ndeye default, ine Vhidhiyo uye Zvimwe kurudyi, Mufananidzo kuruboshwe.
Rongedza nzira dziripo kamera: Iwe haufanirwe kuomerera kune zvakasarudzika sarudzo pamusoro - unogona kuwedzera kana kubvisa modhi dzaunoona dzichinyanya kubatsira. Tungamira mune Zvimwe kwaunoona 'Wedzera+' ichionekwa pazasi kurudyi. Tinya izvo uye zvinokutendera kuti udhonze iwo mamodhi aunoda pane inogezera bar, saka haufanirwe kuvhura Zvimwe kuti usarudze.
Nokukurumidza chinja kubva kumashure neshure kamera: Ingo swipe kumusoro kana pasi kana uri muCamera app uye inochinja pakati pemashure nekumberi kwekamera maonero. Kana kuti unogona kudzvanya kaviri bhatani remagetsi zvakare uye makamera anochinja.
Gonesa kuburitsa kwakabikwa: Kana iwe uchida kuti mafaera eDNG achengetedzwe pamwe chete neJPEG yakajairwa, tungamira muzvirongwa zveKamera app uye sarudza 'Mafomati emifananidzo'. Pano iwe unowana sarudzo yekuchengetedza 'RAW makopi' uye zvakare chinja paHEIF )yakanyanya kushanda mifananidzo) futi.
Ita kuti vhidhiyo isimbe: Kune maviri mavhezheni ekudzikamisa: imwe mune kamera marongero anoita seanoshanda kune zvese, kana 'Super Steady', iyo yekupedzisira ichinyanya kushamisa. Paunenge uri muVhidhiyo unoona ruoko rune wiggly mitsara yakaitenderedza icon - tinya izvi, inoburitsa yero kuratidza kuti inoshanda. Ongorora: neSuper Steady inoshanda yako yekutora resolution inobuda pa1080p60. Kana iwe wasarudza 8K kana UHD (4K) ipapo kamera inongochinja kuenda kuFHD.
Kupfura muHDR10 + vhidhiyo: HDR10+ ndeye beta (kana 'Labs') chimiro. Vhura iyo Kamera app, rova ​​​​zvigadziriso cog, wobva wasarudza 'Yepamberi yekurekodha sarudzo'. Muno uchaona sarudzo yemhando yepamusoro yemhando yekutora fomati, asi inongowanikwa chete kana iwe uchipfura 1080p30 - chero chinhu chepamusoro resolution kana furemu chiyero uye ichaitwa grey kunze.
Tora mufananidzo we selfie: Ingochinja kumberi kamera uye sarudza Portrait kubva kumenyu. Pane zvinomwe zvakasiyana mhedzisiro uye masikirwo ekuyedza, akavhurwa kuburikidza nediki denderedzwa chiratidzo kuzasi kurudyi kwechioni.
Samsung Galaxy S22 kumucheto kwetimuti matipi
Edge skrini yaifanirwa kuita kuti mipendero yakakomberedzwa iwedzere kubatsira nekupa diki menyu yakatenderedza kumucheto. Asi nepo iyo S22 uye S22 + iine flat kuratidza, ivo vachiri kupa iyi mashandiro!
Wedzera kana bvisa mapaneru emupendero: Musoro muzvirongwa> ratidza> mapaneru ekumucheto. Tinya paPaneru mukati meizvi uye iwe uchaona kusarudzwa kwemapaneru aripo uye iwe unogona kuwedzera nekubvisa iwo ausingade. Namatira kune zvinobatsira, zvikasadaro iwe unozopedza nguva yakawanda uchitenderera uye shoma uchiita.
Fambisa mupendero wedanga remupendero kune chero kwaunoda: Iwe unogona kufambisa mubato wekumucheto (paunofanirwa kutsvaira kuti uvhure mapaneru ekumucheto) kune chero kuruboshwe kana kurudyi kwechidzitiro. Ingodzvanya woibata uye unogona kuikweva uchitenderedza. Kana iwe usingade kukwanisa kuifambisa, unogona kukiya chinzvimbo muzvirongwa, sepazasi.
Shandura ukuru uye pachena kwema mupendero paneleti mubato: Musoro muzvirongwa> ratidza> edge mapaneru> mubato. Mukati mezvirongwa izvi unogona kushandura mubato - kusanganisira kuita kuti usaonekwe, kushandura ruvara, saizi uye, kana uchida, ita kuti iite zvekuzunguza kana yabatwa.
Dzima mapaneru ekumucheto: Musoro muzvirongwa> ratidza> mupendero wepaneru. Ingoibvisa uye nzira yekudimbudzira ichanyangarika.
Bixby mubatsiri weSamsung. Yakaita kutanga kwayo paSamsung Galaxy S8 muna 2017. Mubatsiri anogona kuita zvinhu zvakasiyana-siyana, asi zvakakamurwa kuita Bixby Voice uye Bixby Vision. Isu takafukidza mamwe matipi eBixby muchikamu chevabatsiri vedhijitari pamusoro. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezveBixby, isu tine a yakazara Bixby chimiro chekuti unakirwe.
Batidza kana kudzima bhatani reBixby: Bixby inosanganiswa mubhatani remagetsi. Kana iwe uchida kushandura izvi, enda kune zvigadziriso> advanced features> side key.
Gadzira Bixby Routine: Musoro muzvirongwa> advanced features> Bixby Routines. Dzvanya mune izvi uye kune akasiyana maitiro esarudzo. Semuenzaniso, kana iwe uchienda kunze kwenyika, wodzima nharembozha otomatiki. Iwe unogona kuita tsika dzetsika dzakatenderedza kuvhura app, iyo yakanakira yemitambo, semuenzaniso mumwechete.
Shandisa Bixby kuwana zvigadziro pafoni yako: Chimwe chezvinhu zvinoyevedza nezveBixby ndechekuti inogona kushandiswa kuwana marongero pane yako Galaxy kifaa. Vhura Bixby kuburikidza nebhatani kana kuti "Hesi Bixby", wobva wataura zvaunoda kushandura pafoni yako.
Shandisa Bixby Vision kududzira: Vhura iyo Kamera app uye iwe unowana iyo Bixby Vision mune Zvimwe chikamu, kumusoro kuruboshwe. Tora izvi uye ichavhura Vision. Nechekuita inogadzirirwa kuverenga mabarcode uye kutenga - asi vhura menyu uye unowana sarudzo yekubatidza dudziro, iyo inonyanya kubatsira.
Samsung Galaxy S22: Maitiro ekutora skrini
Tora mufananidzo: Dzvanya vhoriyamu pasi uye mabhatani ekumira panguva imwe chete - asi kwete kwenguva yakawandisa zvikasadaro inomisa yekudzima-simba skrini.
Palm swipe ye skrini: Kana iwe usingade kudzvanya mabhatani, swipe mupendero weruoko rwako pane iyo skrini. Izvi zvinogona kudzimwa muzvirongwa> maficha epamberi> mafambiro nemaitiro> Palm swipe kubata.
Samsung Galaxy S22: Battery matipi
Dzikisa kupenya kwekuratidzira: Hazvishamisi kuti kupenya kwechiratidziro ndechimwe chekushandisa kukuru kwebhatiri. Svetera pasi kuti uone mumvuri wekuzivisa uye gadzirisa inotsvedza inopenya sezvainokwana.
Shandura resolution: Iyo yakanyanya kugadziriswa iwe yauri kushandira iyo yakawanda bhatiri kupera iwe unotambura. Zvekare, iwo mirairo iri kuwedzera kumusoro peji, asi musoro kune zvigadziriso> ratidza kuti uwane sarudzo.
Vheneka nzira yakasviba pane yako sosi: Pane humwe humbowo hwekuti kushandisa rima modhi kunodzikisira simba rinoda foni kuvhenekera ese aya machena kumashure. Zvekare, iri muzviratidziro sechinhu chekutanga chaunoona.
Bvisa maficha ausiri kushandisa: Mafoni eSamsung anouya akazara nemaficha uye hausi kuzoashandisa ese. Muzviitiko zvakawanda unogona kuvadzima. Izvi zvinogona kusanganisira zvese zvekuita neBixby, NFC, yechipiri SIM kadhi slot, epamucheto mapaneru, kupenya kupenya, zvese zviziviso zvekuzunguza, zvichingodaro.
Wona zviri kudya bhatiri: Musoro muzvirongwa > bhatiri uye kuchengetedza mudziyo. Tinya iyo 'Battery' pani, iyo inokuratidza inofungidzirwa hupenyu hwebhatiri hwasara. Skroka pasi uye iwe unoona kuti ndeapi maapplication anga achidya hupenyu hwebhatiri zvakanyanya - unogona kuwana mamwe mashura muno arikumhanya kumashure, saka unogona kubva wazvitsvaga mumaseting eapp kuti ubvise mvumo kana mashandiro ekumashure.
Tarisa nhoroondo yako yekushandisa yebhetri: Papeji rekushandisa bhatiri rakatsanangurwa pamusoro, unogona kutarisa kusvika "mazuva manomwe apfuura". Kupenengura pasi peji kunoburitsa maapplication akashandisa bhatiri rakawanda musvondo rapfuura, zvichibatsira kuziva nhubu dzakanyanya - vamwe vanoshamisika, vamwe vanongoratidza maitiro ako ekushandisa.
Shandisa simba rekuchengetedza simba: Kungorova nzira yekudimbudzira muzvirongwa zvekukurumidza, kana musoro muzvigadziriso> bhatiri uye kuchengetedza mudziyo> bhatiri. Pano iwe unogona kubatidza simba rekuchengetedza modhi, uine dzimwe sarudzo dzezvipi zviito zvinotorwa kuchengetedza bhatiri rako. Iyo inodzikamisa kumashure kushandiswa kwetiweki, kuwiriranisa, kuwana nzvimbo, uye kudonhedza kufamba kutsetseka kusvika ku60Hz. Kune zvakare akapatsanurwa-akasarudzwa nemushandisi sarudzo yekudzima nguva dzose-pakuratidzira, kumisa CPU kumhanya kusvika 70%, kuderedza kupenya negumi muzana, kudzima 10G yekubatanidza.